Crypto lending rates are low and DeFi is not competition says Nexo co-founder | CoinGenius Hosts Virtual Crypto Event
Amanani wokubolekwa kwe-Crypto aphansi kanti iDeFi ayisiyomncintiswano kusho omunye wabasunguli beNexo
Emasontweni 4 edlule
Izihloko ezihlobene:U-Antoni TrenchevAsiaizimpahlaibhangeblockchainIBlockfiCelsiusInethiwekhi yeCelsiusImaliCompetitionamazwecryptoukubolekwa kwemali ye-cryptoehloniphekileDefiAmaphrojekthi we-DefiBAKHALAfiatEzezimalizezimaliisithakazeloIzithakazelo AmananiInterviewJULANIUkubolekaMarketMarketsimaliimakethe yemaliNexoAbantuProjectsIsizathuingoziezezimali zendabukoUmhlabaVezaisivuno sokulima
I-Akropolis: Ingxenyekazi ye-DeFi Yomnotho Ongahlelekile
I-IRS ibuza umbuzo olula othi "Yebo noma Cha" Ukubhekana Nabahlukumezi Bentela Ye-Crypto
IMonex Ukunikela Ngezinsizakalo Zokubolekwa Kwesitoko kuma-Akhawuntini Wemajini
Inhlolovo: Isimo esihle semakethe seBitcoin sikhanyisa i-USD, izimali zaseYurophu
Masikhulume Nge-Audius: Uhlelo lokusebenza lwe-Ethereum Music Ukubeka Ukusakaza Ezandleni Zabaculi
I-Bitcoin Breaks New 2020 High Njengoba Ingqikithi Yemakethe Yonke Ifinyelele ku- $ 400 Billion (Ukubuka Kwemakethe)
Ukuhlaziywa: Ingabe ama-CBDC ayingozi ku-Bitcoin noma i-Opposite?
I-BOJ Official: I-Central Bank yaseJapan Ayikwazi Ukuqalisa I-CBDC Ngaphandle Kokuxhaswa Komphakathi
I-brokerage yaqala ukuletha le nsizakalo ngoJanuwari 2003.
30 amaminithi adlule
Inkampani yaseJapan ekuthengisela amasheya online iMonex, Inc. imemezele ngoMsombuluko ukuthi izovuma ukubolekisa ngamasheya services kuma-akhawunti ayo wokuhweba oseceleni, kusukela ngoNovemba 6.
Izinsizakalo zokubolekwa kwesitoko zizovumela abanikazi bama-akhawunti we-marone we-margin ukuthi bathole inzalo besebenzisa amasheya wesibambiso sokuhweba. Amakhasimende wabarhwebi azoboleka amasheya abo kubarhwebi abazokhokha amanani enzalo afanele.
Joyina abaholi bemboni yakho kwi-Finance Magnates Virtual Summit 2020: Bhalisa bese uvotela imiklomelo ye-FMLS
"Amakhasimende anama-akhawunti okuhweba asemkhawulweni manje azokwazi ukusebenzisa amasheya awo njengezibambiso ezithatha isikhundla sezentengiselwano ezisezingeni eliphansi futhi athole nenzalo yemalimboleko ebolekisayo," I-Monex kuchaziwe. “Izibambiso ezingezansi ezisetshenziselwe ukubolekwa kwesitoko zizohlolwa ngendlela efanayo nokuthi bezingabolekiswanga, ngaleyo ndlela zingaphazamisi amanani ezondlo.”
Imvamisa, i-brokerage izokhokha inzalo yaminyaka yonke yamaphesenti ayi-0.1. Kodwa-ke, kwamanye amasheya, isilinganiso senzalo singaya phezulu ngamaphesenti ayi-10 futhi sisebenza ngokuqhubekayo ukufaka amasheya wenzalo yebhonasi kulolu hlu.
I-ACY Securities Isekela i-ASIC's Product Intervention OrderIya ku-athikili >>
I-brokerage iveze ukuthi abadayisi bangathengisa kalula amasheya abolekisiwe ngaphandle kwezinqubo ezikhethekile.
Lokhu kuthuthukiswa kwezinsizakalo kweza njengoba abezentengiselwano babethola "izicelo eziningi" zokuvumela izinsizakalo zokubolekwa kwesitoko kwamakhasimende okuhweba amarandi.
Izinsiza Ezithuthukisa Abahwebi
IMonex yaqala ukunikela ngezinsizakalo zokubolekisa ngamasheya ngoJanuwari 2003 futhi ithuthukise ukunikela kwayo kusukela lapho.
I-subsidiary yeMonex Group iveze ukuthi bambalwa kuphela ezimakethe zokuhweba zaseJapan, kufaka phakathi iMatsui Securities neRakuten Securities, abanikela ngezinsizakalo zokubolekwa kwesitoko, ngenkathi Kabu.com Ezokuphepha ziyinikela kancane le sevisi.
Ukuthola izinzuzo zokubolekwa kwesitoko, amakhasimende eMonex adinga ukulahlekelwa ezinye izinzuzo zokubamba amasheya. Kodwa-ke, i-brokerage ithuthukisa ukuqiniswa kwensizakalo ukuze inikeze ngokuzenzekelayo izinzuzo zamasheya kubanikazi abaqhubekayo banoma yimaphi amasheya.
47 amaminithi adlule
Ucwaningo lwakamuva olwenziwe ngu Umbono wangempela iveze ukubukwa okumbalwa okuthokozisayo mayelana nemakethe yanamuhla ye-crypto-market. Ucwaningo okukhulunywa ngalo, ngenkathi kuhlolwa imizwa yezimakethe ezigabeni ezahlukahlukene zamafa, luthole ukuthi ubukhulu becala, kunemizwa enamandla kakhulu ezungeze iBitcoin.
Eqinisweni, ithole ukuthi ama-65% abo bonke ababambiqhaza bemakethe bayakukholelwa lokho Bitcoin izokhuphuka ngaphezulu kwe-5% emkhathizwe wenyanga eyodwa, kuyilapho ama-72% wabahlanganyeli bakholelwa ukuthi izokhula ngaphezu kwe-5% emkhathizwe wezinyanga ezintathu.
Source: Umbono wangempela
Ngenkathi iGolide nayo kulindeleke ukuthi inyuke, ngokusho kweningi labahlanganyeli, amandla okubheka phezulu kulindeleke ukuthi abe phansi esikhathini esifushane, uma kuqhathaniswa neBitcoin. Ekuphakameni kwezinyanga ezintathu, ukubuka kuvuliwe Gold lihle ngokwengeziwe.
Ngaphezu kwalokho, kuhlolisiswa ukuqina nokuba namandla ngaphezulu kwesikalo senyanga eyodwa, esikalini sika -1 (iningi le-bearish) kuya ku- +1 (iningi le-bullish), i-Bitcoin ithole u-0.52 ilandelwa iGolide, ngenkathi zonke ezinye izigaba zempahla ezibandakanya lezo ezinesimo semali egciniwe ziphawuliwe umuzwa we-bearish kakhulu.
Umthombo: Umbono Wangempela
Lokhu okutholakele okuthokozisayo njengoba umuzwa weDola laseMelika usuzibuyisile kusuka ekuqiniseni okuqinile kuya ekuqiniseni, okushintshiwe okungenzeka kubangelwe ukuphrinta kweFed ngonyaka.
Iningi lababambiqhaza emakethe likholelwa ukuthi amazinga okuntengantenga abe phezulu kakhulu kule nyanga, nokuyinto engaqinisekisi, ngenxa yokhetho oluzayo. Ngenkathi u-Okthoba abonile Bitcoin ukukhuphukela ku- $ 13,000, kufanele kuqashelwe ukuthi abaningi balindele ukulungiswa okuzolandela kungekudala.
Eqinisweni, okulindelwe nokuzizwa esikhathini esizayo kufakazelwe kangcono yinani lezikhundla ezinde ezimfishane ezisemakethe. Izikhundla ezinde eBitcoin zikhuphukile, nge-83.5% yabaphenduli ababika izikhundla ezinde, kungabikho zikhala ezimfishane ezibikiwe phakathi kwabahlanganyeli.
Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi amamethrikhi ambalwa akwenzile gqamisa ukungabikho kwesasasa lokuthengisa ngesikhathi sokunyuka kwamanani kwakamuva kakhulu, okutholakele okuyisipanela emisebenzini yokubona okunamandla kwemakethe. Njengoba kubikiwe, kungenzeka ukuthi noma yikuphi ukwehla kwentengo kumuncwa yizikhungo, kunikezwe ama-ATH ezikhungo kanye nezimali ezikhokhelwe eziphethe izikhundla ezinhlangothini eziphambene I-BTC futures.
Kuyabonakala ukuthi kunemibono eminingi enhle ezungeze iBitcoin okwamanje, hhayi nje evela kuma-maximalists weBitcoin. Njengoba kungabonakala eshadini elingenhla, imizwa yokushintshana kanye nezingxoxo zeCFTC nazo zinamandla ku-BTC naku-bearish kuma-Equities.
57 amaminithi adlule
Ezezimali akuyona nje indawo yamabhange amakhulu nezinhlobo zesudi nothayi. Imali ithinta cishe zonke izici zayo yonke impilo yethu.
Leso isithembiso esikhulu samanethiwekhi wohlelo lokusebenza asezingeni eliphansi njenge-Ethereum. Inika noma ngubani noma kuphi emhlabeni ikhono lokwenza nokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezivulekile neziphethwe ngumphakathi, ezingahambisani nabantu abafuna ukurenta phakathi nale nqubo.
Lokho kusho ukuthi enye yezindawo ezithembisa kakhulu ukuthi i-Ethereum ingaletha kuyo yizinkundla zamasiko. Kunanini ngaphambili, abaculi nabadali badinga izindlela ezintsha zokuqinisekisa izimali zabo ngokwemibandela yabo, futhi i-Ethereum dApps ingaletha izindlela ezinjalo. Yilapho-ke I -udiyo uyangena.
Imboni yezomculo idonsa imali eyizigidigidi zamadola njalo ngonyaka, kepha ingaphezudlwana nje kwe-10% yaleyo mali efika ezandleni zabaculi. Okubi nakakhulu, laba badali abanikezwa noma iyiphi i-ejensi yokuthi kwenzekani ngomculo wabo - kusuka ekusatshalalisweni nangaphezulu - ngemuva kokuwudala.
Isikhathi soshintsho, futhi abakwa-Audius banethemba lokuletha lolo shintsho.
Kanjani? Ngokusebenza njengendawo esatshalaliswayo, ephethwe ngumphakathi enikeza abaculi amandla okuphatha umculo wabo futhi benze izindlela ezintsha zokukhokhelwa, futhi bacebise nabalandeli babo. I-Audius ayingethembi, ngakho-ke abadali akudingeki bakhathazeke ngokuhlolisiswa ubuciko babo njengoba bebengenza kuzingxenyekazi eziningi ezinjengo-Apple noma i-YouTube.
Ngaphezu kwalokho, i-Audius ingumthombo ovulekile, ngakho-ke abathuthukisi emhlabeni jikelele bakhululekile ukuyakhela phezu kwayo futhi bakhe izinhlobo ezintsha zomuzwa womculo nokho abangathanda. Futhi amathuluzi wedatha yesikhulumi angasiza abaculi baqonde kahle ama-fanbase abo.
Kuze kube manje, amapulatifomu okusakaza umculo aphakathi nendawo ngeshwa akhombise ukuthi ayizinhlaka ezifuna ukuqasha ezikhipha inani elikhulu kubaculi ngangokunokwenzeka. Akukhulunywa ngomculo noma abasunguli balezi zinkampani, kumayelana nomugqa ophansi lapho kutholakala khona inzuzo. Isitobha esigcwele.
Leyo akuyona indlela yokusiza abaculi bachume. Ngakho-ke esikhundleni sokwenza la mapulatifomu abe njengalawo ahlala enawo, ngendlela ephezulu, kuthiwani uma eyodwa yakhiwe kusuka phansi kuya phezulu ngomqondo wokuqala wobuciko, womphakathi? Leyo yi-Audius. Ithimba lephrojekthi lifuna ukuphakamisa amazwi ayo yonke imivimbo, ikakhulukazi abaculi abanganakiwe noma abavinjelwe imboni yomculo wesintu, ngokubanika amathuluzi abawadingayo ukwakha imiphakathi yabo kanye nezezimali.
Ngaphakathi kohlelo lwe-Audius
Ngaphansi kwe-hood, iphrothokholi ye-Audius inezakhi eziningana ezibalulekile zokwakha. Lokhu kufaka phakathi:
Isixazululo sokugcina sefayela se-AudSP.
Incwadi yokuqukethwe ye-Audius.
Ukuqala, i-AudSP wuhlelo lwefayela olwakhiwe ku-IPFS (i-InterPlanetary File System) lapho abaculi bengalayisha umculo wabo ku-Audius ngenzalo ezayo. Izindawo zokuqukethwe zephrojekthi bese zisebenzisana ne-AudSP bese zenza lula izici zokuthola imvume ngemuva kwalokho.
Ukusakaza kuhlelo lokusebenza lwe-Audius
Bese kuba khona ileja yokuqukethwe ye-Audius, engaqondwa njengokuphelele kobudlelwano phakathi kwezivumelwano ezihlakaniphile ze-Audius's Ethereum, i-POA Network, nanoma yimaphi nanoma yimaphi amanye ama-base layer noma ama-layer-two (L2) amanethiwekhi azosebenzisana ne-audius protocol uhlelo. Ngakho-ke, le ncwadi yokuqukethwe inesibopho sokusiza nokuqopha yonke imisebenzi ye-Audius, njengalapho abasebenzisi bathanda amathrekhi noma benza imitapo yolwazi yezingoma.
Okokugcina, akunasisekelo sokubaluleka kohlelo olusha lokubusa lwe-Audius. Njengephrojekthi ephethwe ngumphakathi, lolu hlelo yilona oluzovumela abasebenzisi be-Audius ukuthi banqume phakathi kwabo ngamapharamitha weprothokholi njengamaroyalties, izimali, imivuzo yamathokheni, nokuningi.
Hlangana ne- $ AUDIO
Ukukhuluma ngohlelo lokuphatha lwe-Audius, ukhiye ovula yonke into yilokhu Ithokheni engu- $ AUDIO, eyethulwe okokuqala ngo-Okthoba 2020. Njengalokhu, i- $ AUDIO iyithokheni yokubusa etholwe ngokusebenzisa i-Audius nokuthi abanikazi bayo bangayisebenzisa ukuvota ngokuhlanganyela “kuzenzo zokungeza inani” ezungeze lo mthetho olandelwayo.
"Abaculi kufanele balawule izindlela zabo zokusabalalisa, futhi sikholwa ukuthi ikusasa le-Audius kufanele licaciswe ngabanikeli balo abasebenza kakhulu ukugwema ukuphinda amaphutha okwedlule kwemboni," kuchaza iphrojekthi kwisimemezelo sabo se- $ AUDIO.
Ngaphandle kokubusa, i- $ AUDIO futhi inezilinganiso zokuphepha nezici zokufinyelela. Ngokuphathelene nezokuphepha, ama-Audius node opharetha angafaka u- $ AUDIO ukuvikela inethiwekhi yephrojekthi, kuyilapho abaculi nabalandeli bengabeka uphawu ukuze bavule amathuluzi akhethekile nezinzuzo.
I- $ AUDIO Airdrop
Ngo-Okthoba 23rd, ithimba lakwa-Audius lenze ukusatshalaliswa okungazelelwe kwe- $ AUDIO kubaculi nabasebenzisi besikhulumi abaphezulu be-10,000 kuze kube manje. Ngokuphawulekayo, phakathi kwabaculi abavelele abafakiwe kudrophu kwakunguZeds Dead, i-RAC, ne-deadmau5.
“Njengomculi, ngichitha isikhathi sami esiningi ngibheka ekhoneni ngekusasa lalo mkhakha, kanti ne-Audius kuyiyona ndlela eya phambili,” kusho uJoel Zimmerman, owaziwa ngelika-deadmau5, naye osejoyine iqembu le-Audius.
Ezindabeni zokukhululwa kwethokheni, u-Dead Wilson, isikhulu esiphezulu selebuli yokurekhoda ezimele ye-deadmau5, ungeze wathi:
“I-Audius nokwethulwa kwe- $ AUDIO kukhombisa igxathu elikhulu eliya phambili lokuthuthuka kwemboni yezomculo kanye nobuchwepheshe obuphehla ubudlelwano phakathi kwabaculi nabalandeli. Isizukulwane esilandelayo sabaculi sithutheleka kwa-Audius ngoba kuyacaca ukuthi ikusasa. ”
Ukubungaza ukukhishwa kwe- $ AUDIO nokwethulwa okuqondanayo kwe-Audius ku-mainnet ye-Ethereum, iphrojekthi ibambe ikhonsathi ethi "Welcome to Mainnet" ngo-Okthoba 23rd, nayo.
Ikhonsathi yeTwitch bekungeyona nje into yokwelashwa kwayo bukhoma kusuka ku-deadmau5 ne-RAC - iphinde yavumela abalandeli ababuke ikhonsathi ukuthi bafune isikweleti esikhethekile se- $ AUDIO esinikezwe imikhosi.
kuyenzeka ✨@AudiusProject iza kwi-mainnet futhi ngidlala isethi nge @ nhlanhlamkhize5 on @Twitch.
NgoLwesihlanu Okthoba 23rd ngo-6: 30 PM PST
I-RSVP: https://t.co/xrzTlzAEkT pic.twitter.com/EdVjjPMU1Y
- RAC (@RAC) October 20, 2020
Abaculi Amathokheni Uyeza
Ngakho-ke sibonile ukuthi ikuphi i-Audius manje. Kepha ipulatifomu isukaphi lapha?
Ngenkathi iqembu lephrojekthi linemisebenzi eminingi yokuthuthuka njengamanje kusilayidi sayo, enye yezinto ezithakazelisa kakhulu ukwengeza ukusekelwa kwamathokheni wabaculi (isb. $ RAC ithokheni leyo RAC isanda kukhishwa).
Ngempela, sesiqala ukubona abadali abaningi ngokwengeziwe njenge-RAC bethula amathokheni abo omphakathi. Ukuqhubekela phambili, i-Audius ihlela ukungena kuwo wonke la mathokheni ngokunikeza abaculi amandla okusabalalisa ngokwendabuko futhi basebenzise amathokheni abo abaculi ngesikhulumi sokusakaza, isb. Ukukhawulela izici ezikhethekile kubanikazi bamathokheni. I-Audius nayo ilungiselela ukusebenza njenge-aggregator yamathokheni omculi ngokusekela amathokheni angaphandle avela kuzingxenyekazi zamathokheni omphakathi afana neRoll neZora. Ngokwengeziwe, abaculi bazokwazi ukufaka imali ku- $ AUDIO ukuze bathole izinsizakalo zokuxhasa amathokheni we-premium.
I-Roadmap ye-2021 ne-Beyond
I-Audius inezinhlelo ezinkulu ngekusasa, njengoba iphepha elimhlophe lephrojekthi likhombisa:
“Umphakathi wakwa-Audius uzokhipha izindlela ezintsha zobunikazi bokuqukethwe nemali engenayo engakaze yenzeke, ixhaswe ngabokuqala be-crypto-native abashayela umthetho olandelwayo ngaphansi kwesimo. Njengesiteji esilungele ukuvala igebe phakathi kwe-crypto nezethameli ezijwayelekile, abakwa-Audius bazohlala bebeka phambili ubulula ukuze banikeze ulwazi lomsebenzisi olunembile olusekelwe kwi-web3. ”
I-Audius ingahle ingabi i-Ethereum dApp esezingeni eliphakeme kakhulu njengamanje, kepha iphethe amandla amakhulu njenge- "Soundcloud killer" enganika amandla abaculi njengangaphambili. Ngokunjalo, ibhizinisi lingaba wuhlelo lokusebenza olukhulu ngokuzayo uma Umnikazi Wobunikazi uqhubeka nokudlala njengoba usunjalo manje.
Okwamanje, ngokuqinisekile uzofuna ukugcina i-Audius ku-radar yakho njengephrojekthi ezayo nezobuka.